Laminas Project, iyo Linux Foundation inotsigira kuvandudzwa kwePHP zvirongwa zvekushandisa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Zend Sisitimu webhusaiti yatove kuzivisa iyo shanduko kune iyo Laminas chirongwa
La Linux Foundation yakaziviswa, pamwe chete neZend Technologies uye Rogue Wave Software, iyo Laminas chirongwa. Kubva ikozvino zvichienda mberi, hwaro se ichatarisana nekuenderera kweZend Sisitimu.
Zend Sisitimu iri muunganidzwa wehunyanzvi PHP mapakeji. Aya mapakeji anoshandiswa kugadzira webhu kunyorera uye masevhisi. Iyo inoshanda neshanduro dzakakwira kupfuura PHP 5.6, uye inopa zana% kodhi inotarisana nechinhu ichishandisa huwandu hwakawanda hwezvimiro zvemitauro.
Munhoroondo yayo yese, Zend Sisitimu yakawana yakagamuchirwa yakawandisa mumaindasitiri ese uye nemhando dzekushandisa. Kuiswa kwacho kunopfuura mamirioni mazana mana. Izvozvi iri kushandiswa nemakambani akadai seBBC, BNP Paribas uye Offers.com. Zend Sisitimu inoumba hwaro hwakawanda hwekunyorera bhizinesi uye masevhisi. Izvi zvinosanganisira e-commerce mapuratifomu, zvemukati manejimendi, zvehutano masystem, evaraidzo mapuratifomu uye masuo, mameseji masevhisi, APIs pakati pevamwe vazhinji.
Nekutsigirwa kweLinux Foundation, zvichave zvichikwanisika kuenderera mberi mukuvandudza zvishandiso zvePHP zera rinotevera rewebhu masevhisi nemaAPIs. Panguva imwecheteyo izvozvi Zend Sisitimu yezvinhu zvichachengetwa.
1 Laminas chirongwa chehunhu
1.3 Iyo kodhi
Laminas chirongwa chehunhu
Sezvo Zend Sisitimu yechiratidzo ichiri kushandiswa, Laminas, huwandu hwezwi rechiLatin lamina, ndiko kuti mutete mutete, wakasarudzwa. Sezviri pachena, izvi zvinopfupisa zvinangwa zveiyo purojekiti (vanozvitaura, kwete ini)
Iyo purojekiti inotungamirwa neDare Rinodzora. Izvi ichave nebasa rezvisarudzo zvebhizinesis. Iyo Technical Steering Committeekana (TSC), zvichave ane chekuita nesarudzo dzehunyanzvi.
Iyo technical Steering Committee inotanga kuve nenhengo dzazvino dzeZend Sisitimu Yemunharaunda Yekuongorora Timu. Kune izvi zvinowedzerwa vamwe vabatsiri venguva pfupi. Ivo vanoita sarudzo nezve izvo zvinochengetwa, chii chinoshandirwa, uye ndiani anokwanisa kuwana chaiwo marekodhi. Muchidimbu, ivo vane hunyanzvi hwehungwaru hwehungwaru hweprojekti.
Bhodhi revatungamiriri rinoumbwa nevamiriri vemakambani enhengo. Pachavewo nenhengo imwe chete kana dzinopfuura dzeTSC. Bhodhi iri basa rekumisikidza hutongi mamiriro uye manejimendi manejimendi eprojekti. Ivo ndivo vanoita zvisarudzo zvebhizinesi, seta bhajeti. Ivo vari pamusoro pekuronga zviitiko uye mapoka anoshanda. Mamwe mabasa anosanganisira kupa rutsigiro rwekushambadzira kuchirongwa uye kugadzirisa zviri pamutemo kana zvinhu zvehungwaru zvinoitika.
Muzvirongwa ndezvekuwedzera diki boka revagadziri. Basa ravo richava rekubatsira kunongedza zuva nezuva-kugadzirisa, kugadzirisa otomatiki, kuchengetedza pamhepo kuvepo pawebhu- Vanozotarisirawo mamwe mabasa anodiwa kuti purojekiti irambe iri mugwara. Mune mamwe mazwi, ivo vanozobvumira vamwe vese vemunharaunda kuti vatarise kufambisa chirongwa ichi kuenda kumberi.
Kodhi iripo ichachengetwa. Ichave iripo paGitHub, asi ichaverengerwa-chete. Izvi zvinobvumidza zvivakwa zviripo kuti zvirambe zvichishanda pasina kukanganisa. Nekudaro, iyo yekuchengetera ichataura zvakajeka kuti budiriro iri kuenderera pane chirongwa chitsva. Mapindiro emapakeji akanangana muPackagist anozomakwa seasina basa uye anonongedzera kune inoenderana nyowani Laminas package seimwe nzira.
Mepakeji dzese dzakaburitswa neiyo purojekiti dzinozoiswa mucherechedzo sekutsiva kweZend Sisitimu mapakeji zviripo makirasi, uye zvinosanganisira maturusi ekurondedzera akagarwa makirasi kune matsva mapakeji makirasi Izvi zvinobvumidza kusangana kusinganetsi mumapurojekiti aripo, kunyangwe uchishandisa raibhurari yechitatu-bato iyo inotora mukana weiyo ZF kodhi.
Iyo purojekiti ichaita ipa zvishandiso zvevagadziri kuti vagadzirise kodhi yavo. Izvi zvichavatendera kuti vashandise makirasi matsva anopiwa nemapakiti eLaminas, pamwe nekugadzirisa zvinoenderana.
Maitiro ekuchinja afambira mberi. Nechekare dzakachengetedza domains, maGitHub maakaundi akagadzirwa, kutanga kwekutsigira kuzvipira kuri kuitika, uye maturusi ekushandisa muchikamu chekuyedza. Chinangwa ndechekushanda mukota yechipiri kana yechitatu ya2019.
Sezvo zvese zvemari nehunyanzvi zviwanikwa zvinodiwa kuti zvishande. Iyo Laminas chirongwa chiri kutsvaga nhengo kuti dzipe mbiri. Ivo vanofarira vanogona kunyorera pano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Laminas Project, iyo Linux Foundation inotsigira kuvandudzwa kwePHP zvirongwa zvekushandisa